Mofon’aina – ALAKAMISY 24 MAI 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 24 MAI 2018
Fampianarana marina, Finoana
2 PETERA 1 :16-21
HAMAFISO ORINA NY FINOANA
1-Aoreno amin’ny Tenin’ Andriamanitra .
Marobe ny fampianarana feno hafetsifetsena notorin’ny sasany tamin’ny andron’ny Apostoly , ka nanimba ny fiainan’ny fiangonana . Mitovy amin’ny ankehitriny ihany izany. Izany indrindra no ijoroan’i Petera ho vavolombelona eo amin’ny and 18, tamin’ny nandrenesany mivantana an’ Andriamanitra niteny , nandritra ny fiovan-tarehy tao an-tendrombohitra (Mar 9 :1) . Izany no ilazany hoe: « manana teny mafy orina kokoa isika » (and 19). Voarakitra ao amin’ny Soratra masina izany ankehitriny. Ao no anovozy ny Tenin’ Andriamanitra hanamafy orina finoana. Izany no mahatonga ny Protestanta hanamafy hoe: Ny Soratra masina irery ihany . Ivelan’ny Soratra masina dia anganongano foronina.
2-Aoreno amin’ny famoahan-kevitry ny Soratra Masina
Ny andininy roa , ny faha- 20 sy 21 dia milaza ny famoahan-kevitry ny Soratra masina , misy anjaran’ny olona izany eo andaniny ary ny fanahy masina ankilany , tsy fisainan’ny olona fotsiny amin’ny fianarana sy famakafakana ary fandalinana fa tsy maintsy eo ambany fitarihan’ny Fanahy masina . Samy hadisoana ny filazana na ny hoe: asan’ny Fanahy fotsiny ny famoahan-kevitry ny Soratra masina , na ny hoe: vitan’ny asa sain’ny olombelona izany. Ny tena finoana dia ny Tenin’ Andriamanitra ampitainy avy amin’ny Soratra masina , ka hazavain’ny olona araka izay hitondran’ny Fanahy Masina azy (vakio and 21b). Izany no re ao am-piangonana. Koa aoreno amin’izany ny finoantsika.
Ahoana ny hevintsika :momba ny filazana fa tsy ilaina ny mianatra sy mandalina fa asan’ny Fanahy irery izany ?